အောင်မြင်မှု အစစ် | မေတ္တာရိပ်
ခန္တီတရား လက်ကိုင်ထား →
အောင်မြင်မှု အစစ်	Posted on March 29, 2013	by mettayate လူတွေရဲ့စိတ်မှာရှိတဲ့ အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ အရည်အချင်းတွေထွက်မလာတာ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြတ်သားတဲ့ရည်ရွယ်ချက် မရှိလို့ဘဲ။
အလုပ်ကိုမထိတထိ လုပ်ကြည့်တယ်၊ အခက်အခဲနဲ့ကြုံ ရင်နောက်ဆုတ်တယ်၊
အဲဒီလိုလူဟာ မကြီးပွားဘူး ၊ မအောင်မြင်ဘူး။
ရှာပြီးတော့လုပ်နေမယ် ၊ လုပ်လို့အဆင်မပြေရင် ဘာဖြစ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာ စဉ်းစားမယ်။ ပြင်ကြည့်မယ်၊ ပြင်ကြည့်လို အဆင်ပြေသွားရင်ဆက်လုပ်မယ်၊အဆင်မပြေသေးရင်ထပ်ပြီးတော့ပြင်ဦးမယ်။
ဒါဆိုရင် အမှန်မုချ အောင်မြင်တော့မှာပဲ။
ပြိုင်ပွဲမှာပထမရတာ၊ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနဲ့နေနိုင်တာ၊ရာထူးအမြင့်ဆုံးရောက်တာ၊ ဘွဲ့ထူးကြီးတွေရတာ၊ ဂုဏ်ပြုတာတွေခံရတာတွေဟာ အောင်မြင်မှုအစစ် မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ့်ဘ၀မှာကိုယ်တကယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်၊မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်၊ ကိုယ့်ဝါသနာစရိုက်ပါရမီနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်၊ ကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘ၀မှာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နဲ့အခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆန္ဒကိုအကောင်အထည်ဖော်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လူဟာအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်တယ်။
ဘ၀မှာအောင်မြင်မှုဟာ မုန်းတီးမှုကိုအခြေခံတဲ့အလုပ်ကို ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး။
သူတစ်ပါးကိုမုန်းတီးမနေဘူး။ သူတစ်ပါးကိုမုန်းတီးနေသူ၊ အပြစ်တင်နေသူဟာ အောင်မြင်တဲ့သူ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
This entry was posted in ဆုံးမသြ၀ါဒများ. Bookmark the permalink.	← မာန်မာနကင်းရှင်းခြင်း